Saxaafada Muqdisho iyo siyaasiin Xamar ku sugan oo ay kusoo kacday jirradii Puntland nacaybka kadib markii Puntland gurmad caafimaad udirtay walaasho | puntlandi.com
Wednesday, October 18th, 2017 | Posted by P2
Saxaafada Muqdisho iyo siyaasiin Xamar ku sugan oo ay kusoo kacday jirradii Puntland nacaybka kadib markii Puntland gurmad caafimaad udirtay walaasho
Halganka iyo gurmadka loo fidinayo dadka Soomaaliyeed ee dhibtu gaartay waa mid ka mid ah waajibaadka laysku leeyahay.
Soomaalinimo ehelnimo, iyo muslinimo intaba waa muqaddas iscaawintu, kuwa doonaya in ay gargaarka qaarkiis xumaan kasoo saaraan oo waliba hadalkoodu ku toganyahay gargaarkii Dawladda Puntland ku deeqday iskana dhigaya rag wax saxaya waxaan leeyahay adeer ceelbey inkaga dhacday.
Waxaan arkay rag badan oo aan bidayey inay meel dheer wax ka arkaan oo dadka ugu ridaya dhegaha in Puntland siyaasad ka leedahay macaawinada dhibbanayaasha loo wado, war yaa Alle yaqaan oo islaam ah, raggaas waxaa ka mid ah journalist yaal caan ah oo aysan aqoon darro hayn lkn qalbigoodu meel kale u jeedo, iyaga laftooda ayaa raba inay dadka kala fogeeyaan.
Qaar baa macaawinadii ku dul qoray “Hanka xumi ha beenoobo” oo ah oraah ka mid ahayd silsiladdii haanta la oranjirey ee ay iswaydaarsan jireen abtigay Shaafici Xasan Maxamed iyo gabyaa kale oo la yiraahdo Ibraahim A. Hawd, oo la tiriyey waagii Itoobiya ay soo gashay koonfurta Soomaaliya iyadoo caawinaysa dawladdii kumeel gaarka ahayd.
Hanka xumi ha beenoobo, waxaa wagaas looga jawaabay erey kale oo caan noqday oo isna ahaa “Maandhoow hammiga suubbi”.
Haddaad jirran tahay dhaqtar aad ugu yaraan hadduu dawo kuu waayo wuxuu ku siinayaa talo.
Dadku waa ehel waa wada Soomaali, hadba Kan dhibban baa la caawiyaa, gargaarna waa gargaar waa mid gacalnimo. Oo kaalay Bal inaad xanuunsantahay oo aad dullowday, shalay turki iyo Qadar oo aan Soomaali ahaynba waxaad lahayd waa gob oo waa walaalo, haddii mid kula dhashay uu wax keeney maxaad u canbaareeysay?
Ilaahay ha ajar haka siiyo cid kasta oo gurmad fidisay.